Nhau - Iyo Nyowani Coronavirus Yakachinja muSpain Kudzivirira Kudzokorora Kwenhoroondo. Britain, France, Italy neGerman Vanovhura iyo Blockade Policy Zvakare
Nyowani coronavirus inoshanduka muSpain
Munguva yemwaka weHalloween, sekureva kweTIMES, Britain ichavhota muParamende svondo rinouya. Nekuda kwekupararira kwedenda, Britain ichasarudza kupinda munyika blockade zvakare pamberi pechirongwa, icho chinotarisirwa kuramba kusvika kutanga kwaZvita. Iyi ichave iri yakakosha nyika yekumadokero mushure mekuteedzana blockade neGerman, France neItari. Chikonzero chikuru chekushushikana kwenyika dzeEuropean ndechekuti 46% yezviitiko zvitsva zvakasimbiswa pasi rose zvakabva kuEurope svondo rapfuura, uye chetatu chevakafa chakauyawo kubva kuEurope. Sekureva kwesainzi mushumo, mazhinji emakesi matsva ecoronavirus muEurope anonyatsobva kune yakachinjika coronavirus. Utachiona uhu hungangodaro hwakwira chaiko kuSpain, chinova chimwe chezvikonzero zvakakosha nei iyo coronavirus nyowani ichinetsa kudzora muEurope uye ine huwandu hwakanyanya hwekufa!
Kutya nhoroondo kuchizvidzokorora
Denda idzva rekorona rinoyeuchidza vanhu vazhinji nezvekuputika kwechirwere cheSpain munhoroondo yemazuva ano yevanhu. Panguva iyoyo, furuwenza yeSpain yakatanga pamapurazi eAmerica. Sezvo United States yakatumira masoja kuEurope kunotora chikamu muHondo Yenyika I, yakaunzawo hutachiona hweSpain flu nayo. Patakasvika muEurope, nyika dzakapinda muHondo Yenyika I, dzakaita seBritain, France neGerman, dzakatora nzira yekuviga kuitira kudzivirira dzihwa kuti risaparadze hunhu hwepamberi. Zvisinei, Spain, nyika isina kwayakarerekera muHondo Yenyika Yekutanga, yakaramba ichitepfenyura huwandu hwevakafa kubva kufuru. Mamirioni masere vanhu vakatapukirwa nefuruwenza, saka yakazopedzisira yaiswa seSpanish flu. Chinhu chikuru pane furuwenza yeSpain ndechekuti mushure mekuchinja kwechipiri, flu yechiSpanish inotonyanya kutyisa. Huwandu hwevechidiki uye vepakati-makore vanhu vakafa ndivo vaive vazhinji. Zvichienzaniswa nemamiriyoni gumi vakafa muHondo Yenyika I, huwandu hwevakafa hwakakonzerwa nefuruwenza yeSpain hwaive mamirioni makumi mashanu. ~ Vanhu vane mamirioni zana. Hutachiona hutsva hwekorona huri kutsva muEurope panguva ino, Spain ndiyo nzvimbo yakanyanya kurohwa, uye hutachiona hwakachinja hwasimbiswawo muSpain, nezvidzidzo zvekare, saka nyika dzekuEurope dzinotya nhoroondo dzichizvidzokorora, saka vanoita kunge vakangwarira kana inobata nefungu rechipiri rezvirwere zvitsva zvekorona, Hapana nyika nevatsvakurudzi vesainzi vanokurudzira kushandiswa kwehutachiona hwemombe kurwisa iyo coronavirus nyowani.
Dhata kuenzanisa kwemafungu matatu eSpanish furuwenza
Mushure mekusangana nekuziva kwevanhu kweiyo coronavirus nyowani, kunyangwe hunyanzvi hwazvino hwevanhu hwehunyanzvi hwakasimba kupfuura hweFuruwenza yekuSpain yaive yakakurumbira makore zana apfuura, kusvika rinenge gore rekunzwisisa kwekoronavirus nyowani, iri pakati pezvakavanzika uye zvisina chiratidzo. hunhu hwekoronavirus nyowani Zvinoenderana neiyo reshiyo, kupararira kwecoronavirus nyowani kwakasimba, uye kunyangwe muongorori weRussia akazvitapurira neecoronavirus nyowani, achisimbisa kuti iyo coronavirus nyowani inogona kutapukirwa kaviri kana katatu, izvo zvakare zvinoratidza kuti mushonga unoshanda zvakanyanya, uye furuwenza yekuSpain ndiyo yekutanga. Chikamu chakaitika muchirimo cha1918, uye chaingova hosha yakajairika isingabatike zvakanyanya, ndokuzonyangarika zvishoma. Chakanyanya kukanganisa mafungu echipiri eSpanish flu akaitika mukudonha kwa1918. Yaive mafungu ane mwero wepamusoro wekufa. Panguva iyoyo, hutachiona hwefuruwenza hwakapinda nepamuviri hwevanhu ndokukonzera furuwenza yeSpain kuti itange zvakare. Kupedzwa kwekubudirira kunoguma nekubuda kwehutachiona hwakaipisisa. Sezvo immune system yemunhu inochinja kuenda kune yechipiri furuu yeSpanish, gore rimwe gare gare, furuu yechitatu yakaitika munguva yechando ya1919, uye yechitatu furuu yeSpain ine mwero wekufa pakati pePakati pefungu rekutanga uye wave maviri!
Naizvozvo, kunyangwe hosha nyowani yekorona yakadzvanywa muChina, haifanire kutorwa zvishoma. Mushure mezvose, ine nhoroondo segirazi, furuwenza yeSpain ndiro rakanakisa bhuku rehosha yenhoroondo!